I-LUX 2/2 ku-Brickell High Rise - Ijimu/Amachibi/Ibhavu elishisayo
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Luis
**IMINININGWANE YOBUSUKU IYADINGEKA**
Leli fulethi elihle elingu-2/2 litholakala esakhiweni esiwubukhazikhazi esisezingeni eliphezulu endaweni efiselekayo yaseBrickell Village eMiami, eFlorida. Indawo ekahle - Isiteshi saseBrickell siqhele ngamaminithi angu-2 (nokufinyelela ku-metrorail kanye ne-metromover). Jabulela zonke izinsiza ezihlanganisa amachibi amabili, i-lap kanye ne-resort, ubhavu oshisayo, igumbi lokuzijabulisa, isikhungo sokuzilolonga esinezisindo, i-cardio negumbi lokuzivivinya.
Ilungele imibhangqwana, abangani, abahambi bebhizinisi nemindeni efuna ikhaya e-Miami.
- Ukusekelwa kwezivakashi ezingama-24/7
- Ihlanzwe ngokomsebenzi
- Ilineni elisezingeni eliphezulu lehhotela namathawula
- Ngena 24/7 njengoba kukhona ibhokisi lokukhiya elinokhiye
- Ifakwe ngokugcwele
- Isihlalo sokufunda
- Itafula lekhofi
- Itafula lokudlela nezihlalo
- Itafula lokudlela lezingane nezihlalo
Igumbi lokulala 1:
- Umbhede wenkosi
- Hamba ku-wardrobe
- Ilineni lekhwalithi yehhotela
- Ikhwalithi yehhotela amathawula
Igumbi lokugezela 1 (En-suite):
- Owakhe Nowakhe Usinki
- Indlu yangasese
Igumbi lokulala 2:
- 2 imibhede eyodwa
- Ideski lezingane
Igumbi lokugezela 2:
- Umshini wokuwasha
- Ukufinyelela kusuka ku-master bedroom, ikamelo lokulala lesibili nendawo yokuhlala
- I-balcony yangasese
- Ukubukwa okumangalisayo
Ochwepheshe abasebasha bagqoka ngendlela ejabulisa uBrickell, ingane yakubo yaseDowntown enesifiso sokuvelela. Njenge-"Manhattan of the South" yaseMiami, u-Brickell uthatha ibhizinisi lezezimali liye phezulu. Izikhungo zezezimali ezinde, izindawo zokunethezeka ze-condo, kanye nemigwaqo emikhulu ephansi ithunzisa amakhefi ayintandokazi yasendaweni namakilabhu eduze kwase-Miami Avenue. Naphezu kwedumela layo elingenangqondo njengesikhungo sebhizinisi esinedumela elihle, u-Brickell usaziqhenya ngezimfanelo ezinhle ze-Miami—ukukhanya kwelanga okungapheli kanye nezimo zengqondo zokungalaleli.
Kunezindawo eziningi zokudlela ezinhle e-Brickell ezinamamenyu ahamba phambili abapheki abavelele. IBrickell nayo iseduze neMiami International Airport futhi itholakala maphakathi nedolobha iMiami. Ngaphansi kwemisebenzi yobuciko yezakhiwo ephakama ngasemaphethelweni asempumalanga e-Brickell uzothola imigwaqo ethule, enomthunzi enikeza ukunethezeka nomoya okhululekile ongakaze uzwakale phakathi kwezindawo ezinkulu zamadolobha amakhulu. Futhi okuhambisana nokuqalwa kabusha kwale ndawo ehlukahlukene kuwukukhula okukhulu kwezinsiza ezitholakala kubahlali bayo. Akukho lapho okuphawuleka khona lokhu ngaphezu kwendawo yokudlela nokuzijabulisa. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna isemishi endaweni yokudlela eseceleni komgwaqo noma ukudla okuphambili, uzothola okuthile okuzokwanelisa ulwanga lwakho emigwaqweni yaseBrickell.
Ithimba lami labasekeli noma mina ngizotholakala nge-imeyili noma ngocingo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R32010.